आजको विनिमयदर: कुन देशको कति? – सडक मिडिया
आजको विनिमयदर: कुन देशको कति?
सडक मिडिया July 18, 2020 0
काठमाडौं :नेपालमा अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार (साउन ३) मा जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकन मुद्रामा केहि गिरावट आएको छ ।
यस्तै, युरो एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर १३७ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, पाउण्ड एकको खरिददर १५० रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ। यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ ।
र, युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ ।
Previous Post: भारतमा भयावह बन्दै काेराेना, संक्रमितको संख्या १० लाख नाघे
Next Post: भारतमा नेपालीको शीर मुण्डन गर्ने एकजना प’क्राउ – भिडियो
कपनमा भेटिएकी शिशुको सिसी टिभिमा भेटियो प्रमाण, पैसाकै लागि रचियो नाटक 107 views